I-suite yangasese ebanzi endaweni enhle kakhulu - I-Airbnb
I-suite yangasese ebanzi endaweni enhle kakhulu
Garden Bay, British Columbia, i-Canada
I-ikamelo lezivakashi ephelele ibungazwe ngu-Martin
Okusanda kuvulwa ngezibuyekezo ezi-5* ezingaguquki, sinikeza u-1165 sqft wendawo eneziphephetha-moya - amagumbi okulala ayizindlovukazi amabili anamalambu acwebile, igumbi lokugezela elilodwa elihle elinobhavu kanye neshawa yokuhamba ngezinyawo, nendawo eningi yokuphumula. Iwasha yesimanje, umshini wokomisa, isiqandisi, umpheki nomshini wokuwasha izitsha.
Uzoba nompheme oyimfihlo omboziwe onezihlalo zangaphandle nezindawo zokudlela, kanye nokusetshenziswa kwebhavu elishisayo labantu abangu-6. Kukhona ama-kayak kanye nesikebhe ongasisebenzisa, ukuvumela amagagasi. 50 amp ishaja ye-EV esheshayo, ishaja ye-RV.
Sine-1200' yendawo ehamba emanzini e-Oyster Bay eshintsha njalo. Jabulela izilwane zasendle echwebeni lomfula noma amahektha ethu angama-29 ehlathi nezimfunda ezizimele, futhi lapho igagasi likuvumela ungakwazi ukubhukuda noma ukugibela emanzini afudumele, noma nje i-kayak eduze kwamanzi azolile echwebeni.
Ebusika, i-Oyster Bay iyipharadesi lezinyoni, futhi ngobusuku obucwathile ungavele uhlale kubhavu oshisayo futhi ubuke ubuhle bezinkanyezi. Izimvu zamanzi, ukhozi, ama-otters, izinyamazane, ibhere ne-elk zivame ukuvakashela endaweni yethu, futhi kube nokubonwa kwakamuva kwe-cougar, bobcat, beaver kanye nezimpisi ezincane phakathi kwamamitha angamakhulu ambalwa. Ngalesi sizathu, akuyona indawo engcono kakhulu yokuletha izilwane ezifuywayo.
I-HDTV ene- I-Amazon Prime Video, I-Netflix, Isevisi evamile ye-cable kamabonakude
Izolile futhi ithule, inamadolobhana amabili nezindawo zokucima ukoma ngaphakathi kwebanga lokushayela/i-kayaking elilula. Ilungele i-PODS nokuhamba ngezinyawo emapaki endawo (i-Skookumchuck, i-Smugglers Cove njll).
Sihlala kule ndawo futhi siyohlala sikhona ukuze sisize
Hlola ezinye izinketho ezise- Garden Bay namaphethelo